09/03/12 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Monday, September 03, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
From Eleven Media
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) အစီအစဉ်ဖြင့် တပ်မတော်အတွင်း ရောက်ရှိနေသည့် အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ် ၄၂ဦး ကို နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၄င်းတို့၏ မိဘများထံသို့ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ အမှတ်(၁) စစ်ကြောရေးနှင့် တည်းခိုရေးစခန်းတွင် ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကလေးသူငယ်များကို တပ်မတော်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလက်မှတ်နှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကဒ်ပြားများကို တစ်ဦးချင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။
''တပ်မတော်အတွင်း ရောက်နေတဲ့ကလေးသူငယ် ၄၂ ဦးကို နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး မိဘတွေဆီကို တပါတည်း ပြန်လည် အပ်နှံသွားမှာပါ။ ဒီလိုလွှဲပြောင်းပေးရာမှာ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုတဲ့ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား တွေအပြင် ကလေးတွေရဲ့ ၁၀နှစ်ပြည့်ပြီး (သို့) ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီး မှတ်ပုံတင်တွေကိုလည်း တခါတည်း ပေးသွားမှာပါ'' ဟုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်တင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် တပ်မတော်အတွင်း ရောက်ရှိနေသည့် အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေး သူငယ်များမှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)မှသုံးဦး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)မှသုံးဦး၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)မှတစ်ဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ခုနစ်ဦး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှသုံးဦး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးမှ ငါးဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ သုံးဦး၊ ကရင်ပြည်နယ်မှ တစ်ဦး၊ ကချင်ပြည်နယ်မှ တစ်ဦး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ၁၀ဦး ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ လေးဦးနှင့် ချင်းပြည်နယ်မှ တစ်ဦးတို့ပါဝင်သည်။
တပ်မတော်မှ အရွယ်မရောက် သေးသည့်အတွက် နုတ်ထွက်ခွင့်ပေးခဲ့သူ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မောင်အာကာက'' အရှေ့တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ် စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာအသင်း( မော်လမြိုင်)မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေမှားပြီးတော့ တပ်ထဲ ၀င်ဖြစ်သွားတာ။ သူတို့တွေဝင်တော့ ကိုယ်လည်း လိုက်ဝင်ဖြစ်သွားတာ။ တပ်ထဲစ၀င်တုန်းက အသက်က ၁၄ နှစ်ပါ။ အခုက ၁၈ နှစ်ထဲမှာပါ။ မိုင်းရှင်းလင်းရေးမှာ တာဝန်ကျပါတယ်။ ရှေ့တန်းတွေလိုက်ရတယ်။ မိုင်းတွေ လိုက်ရှင်းပေးရတယ်။ အခမ်းအနားတွေမှာ လိုက်ပြီး မိုင်းရှင်းပေးရတယ်။ မော်လမြိုင်မှာ မြ၀တီရှေ့တန်း၊ ဘုရားသုံးဆူတို့ နယ်စပ်တို့ဘက်ကို သွားရတယ်။ ခုလိုလွတ်လာတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော့်လိုမျိုး နောက်လူတွေ မမှားရအောင်လည်း ပြောပြချင်တယ်။ ရခိုင်မှာရှိတဲ့မိဘတွေက မွေးစာရင်းတွေ အိမ်ထောင်စုဇယားတွေပြပြီး ထွက်ခွင့်တောင်းတာပါ။ ခုတော့ ကျောင်းပြန်တတ်ပြီး လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဆက်လုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ အတန်းပညာကတော့ ၉ တန်းအောင်ပြီးသားပါ''ဟု ပြောပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ကလေးငယ်များနှင့် မိဘများကို CTFMR နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနတို့ စီစဉ်သည့် ကြားကာလပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ထိုစခန်းတွင် မိဘများနှင့် အဆက်အ သွယ်မရရှိသေးပါက ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဆေးဝါး ကုသရန် လိုအပ်မှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်းနှင့် လိုအပ်သလို ကုသမှုပေးခြင်း၊ ကျောင်းပြန်တက်ရန် ဆန္ဒရှိပါက ကျောင်းပြန်တက်ရန်၊ ကျောင်းပြင်ပ ပညာသင်ကြားရန်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ဆန္ဒရှိပါက မျှတသော အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်ရန် စသည်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) မှ ဗိုလ်ချုပ်တင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များအား စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို UN CTFMR နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ၂၇ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အ သေးစိတ် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲသဘောတူပြီးဖြစ်ရာ ၁၈လအတွင်း တပ်မတော်အတွင်း၌ အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်စစ်သည် လုံးဝမကျန်ရှိစေရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်တင်မောင်ဝင်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့် အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များအား လုံးဝစုဆောင်းခြင်း မပြုရန်နှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မှားယွင်း စုဆောင်းခဲ့သူများ ရှိပါကလည်း အမြန်ဆုံး ထွက်ခွင့်ပြုရန် စိ စစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်မှစ၍ လက်ရှိအချိန်အထိ တပ်ရင်း တပ်စခန်း အသီးသီးတွင် ရောက်ရှိနေသည့် အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်၆၀၀ ကျော်ကို စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ နုတ်ထွက်ခွင့် ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်ရှင်က သြဂုတ်လ၂၂ရက်နေ့က ဒညင်းကုန်းစစ်သားစုဆောင်းရေး၌ ကျင်းပခဲ့သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ စစ်သားစုဆောင်း ရာတွင် တပ်မတော်ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများနှင့်အညီ စုဆောင်းခြင်း မပြုသည့် အရာရှိနှင့် အခြားအဆင့် ၂၀၁ဦးကို အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းက ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အရွယ်မရောက် ကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ABSDF ကျောင်းသားတွေ ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ
"မျိုးဝင်းကသူ့ ဒေါသတွေကို ထုတ်ပြပါတော့တယ်။ မင်းလက်ရှေ့ ထုတ်လိုက်စမ်း။ မင်းလက်ရှေ့ ထုတ်လိုက်စမ်း။ ချိုကြီးကဒီအမိန့် ကိုဂရုမစိုက်ဘူး။ အစောင့်တွေရိုက်နှက်ထားတာ လည်း မွနေပြီ။ ငါအမိန့် ပေးနေတယ်။ ခု မင်းလက်ရှေ့ ဆန့် လိုက်စမ်း။ ချိုကြီး သူ့ ဘယ်ဖက်လက်ရှေ့ ဆန့် ထုတ်လိုက်တော့မျိုးဝင်းက သူ့ ဓားနဲ့လက်ကောက်ဝတ်က ခုတ်ဖြတ် လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ပြတ်ကို ဓားဦးနဲ့ ထိုးပြီး မြှောက်လိုက်တယ်။ ထွန်းအောင်ကျော် ကိုက်ထားစမ်း။ အဲဒီသွေးတွေမျိုချ။ အေး။ ငါ -ိုး။ ထွေးမထုတ် နဲ့ ။ ထွေးထုတ်ပစ်တာနဲ့မင်းဇက်အပြတ်ပဲ။ ကဲ။အကုန် ထောင်ထဲပြန်ပို့ လိုက်။ ချိုကြီးကိုဆေးခန်းပို့ လိုက်။ ငါသူ့ ကို သွေး လွန်ပြီးမသေစေချင်သေးဘူး။ အကုန်လုံးကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ပစ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်။"
အာဏာပိုင်များခွင့် မပြုေ သ်ာလည်း မန္တေ လးတွင် ဆန္ဒေ ဖ်ာထု တ်နေ
နိုင်ငံတော်သမ္မတအား ထောက်ခံပြီး၊ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားအား ကန့်ကွက်သည့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြပွဲအဖြစ် မန္တလေးမြို့တွင် ဒုတိယနေ့ ဆက်လက်ပြုလုပ်မည့် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် ဆန္ဒပြပွဲသည် အာဏာပိုင်များက တားဆီးမှုများ ပြုလုပ်သော်လည်း ယခုစတင်၍ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ရှိ 7Day News သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။ ယခင် ခွင့်ပြုခဲ့စဉ်က ဆန္ဒပြမည့်လမ်းကြောင်းအား ၇၉ လမ်း ၃၄ လမ်းထောင့်မှ မြောက်ဘက် ၂၇ လမ်းအထိ ဆန္ဒပြချီတက်ကြရန်ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့တွင် ယင်း ၃၄ လမ်းထောင့်မှ လမ်း ၈၀ ဘက် တောင်ဘက်သို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်လျက် ရှိသည်။ ယခင် ခွင့်ပြုသည့် လမ်းကြောင်းမှာ လူသွားလူလာနည်းသည့် လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ယခု ချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်လျက် ရှိသည့် လမ်းကြောင်းမှာ လူသွားလူလာများသည့် လမ်းကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဦးအောင်သိန်း လင်းတင် သွင်းေ သာ အဆိုကို ဒီ ချုပ် ၊တပ်မေ တ်ာသား၊တိုင်းရင်း သားပါတီများ ကန့်ကွက်
ယနေ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ဦးအောင်သိန်းလင်း၏အ ဆိုကို ဒီချုပ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တစ်ဦး ကန့်ကွက် ခဲ့သောကြောင့် ဆက်လက် ဆွေးနွေးသင့်မသင့်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ က မတ်တက်ရပ် ဆန္ဒမဲဖြင့် မဲခွဲခဲ့သည်။ ယင်းသို့ မဲခွဲရာတွင် ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့ နှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးက မပ်တပ်မရပ်ပဲ ကန့်ကွက် ဆန္ဒမဲ ပြုခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် လက်ရှိ အစည်း အဝေးတတ်ရောက်သူ ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေ ၃၅၂ ဦးရှိ ပြီး ဦးအောင်သိန်းလင်း၏ အဆိုကို ထောက်ခံသူ ၁၇၇ ဦးရှိခဲ့ပြီး ထောက်ခံဆန္ဒမဲ အရေ အတွက်မှာ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၏ ၃ ပုံ တစ်ပုံ ထက် ကျော်လွန်သောကြောင့် ကန့်ကွက် ခဲ့သော်လည်းလက်ခံဆွေးနွေးရန် ဥက္ကဌ က ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်သည်။ ” ဆွေးနွေးတဲ့ အခါ မှ ဥပဒေ နည်းဥပဒေ နဲ့ ညီမညီ ထပ်ပြီးသိရမှာပါ။အဲဒီ အခါမှ ထပ် ပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဥက္ကဌ က ပြောကြားသည်။ အဆိုမှာ ” တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် စားကျက်မြေများကို ဌာန ဆိုင်ရာ အမည်ဖောက်၍လည်းကောင်း၊ကုမ္မဏီ အမည်ဖောက်၍ ခွဲဝေချထားပြီးတောင်သူလယ်သမားများကို ထိုမြေများ၌ စိုက်ပျိုးစေပြီး ဌာနဆိုင်ရာများကုမ္မဏီများမှ သီးစားခ ရယူခြင်းများရှိနေပါသဖြင့် လယ်ယာမြေများကို အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နေသူများကိုသာဦးပိုင် အမည်ပေါက် သတ်မှတ်၍ လုပ်ကိုင်ခွင့် ချထားပေးသင့်ကြောင်း” အဆိုဖြစ်သည်။
ကွန်မြူနစ် တရုတ်ကို ချီးမြှောက် ထားေ သာ ပြဋ္ဌာန်း စာအုပ်သစ်အား ဟောင်ေ ကာင်တွင် ထပ် မံဆန္ဒပြ
Posted by drmyochit Monday, September 03, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ကွန်မြူနစ်တရုတ်ကို ချီးမြှောက်ထားသော ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်သစ်အား စာသင်နှစ်မစတင်မီ အစိုးရက ပြန်လည် ဖယ်ရှားပေးရန် တွန်းအားပေးသည့်အနေဖြင့် မိဘများနှင့် ကျောင်းသားများပါဝင်သော လူ ၄၀၀၀၀ ခန့် က ဟောင်ကောင်တွင် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်က စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ မိုးရေထဲတွင် ဆန္ဒပြသူများက အစိုးရရုံးအပြင်ဘက်၌ စုရုံးခဲ့ကြပြီး ဆန္ဒပြသူ ၄၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ပုဂ္ဂလိကရုပ်သံ RTHK က ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကမူ ဆန္ဒပြသူ ၈၁၀၀ ခန့်သာရှိသည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လကလည်း လူ ၉၀၀၀၀ ခန့်က ယင်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်သစ်ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရထားသော ဟောင်ကောင်တွင် ကလေးများအပေါ် တရုတ်က ၀ါဒဖြန့်ချိရန် ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ စာသင်နှစ်စတင်မည့် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်မတိုင်မီ ယင်းကဲ့သို့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောင်းများတွင် ယင်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်သစ်မှ သင်ခန်း စာ များကို ယခုအချိန်တွင် မိတ်ဆက်သဘောလောက်သာ သင်ပေးရန် အစိုးရက ညွှန်ကြားထားပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းအားလုံး၌ မသင်မနေရစနစ်ဖြင့်သွားရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် ဒေသခံသတင်းမီဒီယာအချို့၏ ထုတ်ပြန်မှုအရ ကျောင်းအများစုတွင် ယင်းသင်ခန်းစာများကို ယခုနှစ်အတွင်း မိတ်ဆက်ပေးသွားရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း သိရသည်။ သဘောထား အမြင်အမျိုးမျိုးကို အစိုးရက လက်ခံနားထောင်ပေး သွားမည်ဟု ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ယင်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်သစ်ကို ပယ်ဖျက်ပေး မည့် အရိပ်အယောင်ကိုပင် မပြသခဲ့ပေ။
ကျောင်းသားအရေး လှုပ်ရှားသူသုံးဦးက ယင်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်သစ်အပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသည့်အနေဖြင့် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကို သုံးရက်ကြာ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၃ ရက် ညသန်းခေါင်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီငြိမ်းလင်းနှင့် စည်သူမောင်တို့၏ ထင်ပေါ်ချင်သော လုပ်ရပ်ကို ရှုံချကြောင်း ရေးသားထား
88 ရဲ့ စေတနာ ဝဿန် ဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲတွင် စင်ပေါ်မှ ဆင်းလာချိန်တွင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ နောက်မှ ဒီငြိမ်းလင်းနှင့် စည်သူမောင်တို့၏ ထင်ပေါ်ချင်သော လုပ်ရပ်ကို ရှုံချကြောင်း မန္တလေး ခရိုင်ကျောင်းသားဟောင်းနိုင်ကိုဇော် ရေးသားထားလေသည်။ 88 ရဲ့ စေတနာ ဝဿန် ဂီတ ဖော်ဖြေပွဲ မှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဟောင်းကြီးတွေက ကျောင်းသား သမဂ္ဂ (၂) ခု ဖြစ်တဲ့ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် နှင့် ကသဖ တို့ကို ဘက်လိုက်မှု မရှိ သာတူ ညီမျှ ဖြစ်စေရန် စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ဖယောင်းတိုင်ကိုင်၍ ကဗျာရွတ်ဆိုရန် တဖက်ကို ကျောင်းသား (၂၅)ဦး စီ အညီအမျှကို စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး မျက်နှာလိုက်သည် မဖြစ်စေရန် (၂)ဖွဲ့လုံး ၏ ကျောင်းသားအလံ အား မသုံးရန် ပြောကြားထားခဲ့သည်။ သို့သော် တကယ့် တကယ် တွင် စင်ပေါ်မှ ဆင်းလာချိန်တွင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ နောက်မှ ဒီငြိမ်းလင်းနှင့် စည်သူမောင် တို့ မှ အသင့်ယူဆောင်လာသော ခွပ်ဒေါင်း အလံကို ဖြန့် လိုက်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင် ၈၈ များ၏ စကားကို မလိုက်နာပဲ မိမိ ထင်ပေါ်မူကို ရှေ့ရှု၍ ဆောင်ရွက်ပြုမူခြင်းကို ရှုတ်ချပါကြောင်း ။ အဖွဲ့အစည်း ၊ ကော်မတီ စသည်တို့ တွင် ပါဝင်ပြီ ဆိုလျှင် အများ သဘောတူချက်ကို လိုက်နာရပါသည် ။ အားလုံးသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာတတ်သော ၊ လေးစားတတ်သော ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်စေရန် ကြိုးစားစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမား၏ သရုပ်မှန်ကို သိစေရန်
Posted by drmyochit Monday, September 03, 2012, under သတင်းများ | No comments
မြန်မာပြည် အရေးဟာ အခုချိန်မှာ ရှုပ်ထွေးနက်နဲလာနေပါတယ် ။ ပြည်ပမှာ နေထိုင်ဆဲမို. ပြည်တွင်းက လူတွေ မသိတဲ့ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးလုပ်စားများအကြောင်းသိထားတာမို. ကျမ ပြည်တွင်းမှာ နေထိုင်ခဲ့စဉ်က
ပြည်ပက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများအပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ဟာ လုံးဝကို ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့လိုပဲ ပြည်တွင်းမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မျိုးချစ် ညီအစ်ကို မောင်နှမများကို တကယ့် ပြည်ပမှာ ဖြစ်နေတာလေးတွေ ကို ပြောပြချင် လို. ချရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ် ။ ကျမ ပြောပြခဲ့ဖူးသလို နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာလဲ ကျမ မသိပါဘူး ။ သို.သော် နိုင်ငံ့အရေး လို. အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျမသည် နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားပါသည် ။ ထိုနည်းတူ နိုင်ငံ့အရေး ဆောင်ရွက်မှု.များ ၊ ဆောင်ရွက်သူများကို စိတ်ဝင်စားရာကနေ နိုင်ငံရေးလုပ်စားများ အကြောင်းကို
သိလာခဲ့ရပါတယ် ။ ပြည်ပမှာ မြန်မာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများကို ကောင်းကောင်း ထောက်ပံ့ပါတယ် ။
သတင်း မီဒီယာ များကိုဆို ပိုထောက်ပံ့ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် နော်ဝေ က DVB သတင်းသမားများ အလွန်အထောက်အပံ့ကောင်းများ ရရှိပါတယ် ။ BBC ,VOA,RFA သတင်းဌာနတွေမှာ မြန်မာ အချင်းချင်းကြား နေရာလိုချင်မှု.တွေ ရှိပါတယ် ။ ပြောချင်တာက ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာတွေကို ချင့်ယုံကြဖို.ပါ ။သူတို.က တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်နေတာမဟုတ်ပါ ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်နေတာတွေပါ ။ သူတို.သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ. အစိုးရ မပြေလည်လေ သူတို.ပျော်လေပါပဲ ။
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများကလည်း ( ခေါင်းဆောင်ပိုင်း) တိုင်းပြည်ပျက်လေ သူတို.ခွက်ပြည့်လေပါပဲ ။ ဒီနေရာမှာ
ပြောပြချင်တာက နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များသည် ရေရှည် နေထိုင်ဖို. မသင့်တော်ပါဘူး ။ ပညာ၊ စီးပွား ရှာပြီး
ကိုယ့်ရေမြေမှာ အခြေချခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံး ၊ မြန်မာ့မြေသာအကောင်းဆုံးဆိုတာ ပြည်ပရောက်နေတဲ့
မြန်မာတိုင်း ခံစားမိကြမှာပါ ။ မတတ်သာလို. သူများမြေမှာ ပညာရှာ ၊စီးပွားရှာနေကြပေမယ့် အ်ိမ်ကို လွမ်းဆွတ်တဲ့စိတ်၊ အစားအသောက်တမ်းတတဲ့စိတ် တွေကတော့ မြန်မာတိုင်းရဲ့ တူညီတဲ့ ခံစားမှု.တွေပါ ။ အဲ..... အဲ့ဒီထဲကမှ မတူညီတဲ့ စုန်းပြူးတွေက ရှိစမြဲပါ ။ နိုင်ငံ့အရေးကို ခုတုန်းလုပ် ၊ အထောက်အပံ့အပေးအကမ်း နဲ. ကောင်းစားပြီး တိုင်းပြည်ပြန် သူဌေး လုပ်ချင်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးကုန်သည် စုန်းပြူးများပါပဲ ။ ဗီဒီယိုနဲ.ခွင်ရှာ ၊ သတင်းရောင်းပြီး စီးပွားရှာ ၊ သမိုင်းကိုလိမ်လို. ပထွေးကို နေရာပေး ၊ သူခိုး ဓါးရိုးကမ်းသူ နိုင်ငံရေး သူတောင်းစားတွေလို. ပြောရင်တောင် မမှားပါဘူး ။
ခုဆို အဲ့ဒီစုန်းပြူးတော်တော်များများ ပြည်တွင်း ပြန်ရောက်နေကြပါပြီ ။ ဦးဟန်ညောင်ဝေ ၊ ပြည်ပြေးစိန်ဝင်းလို. လူသိများတဲ့ ဒေါက်တာစိန်ဝင်း က စလို. ဒေါက်တာနိုင်အောင် ၊ မိုးသီးဇွန်တို. ပြည်တော်ပြန်ကြပါပြီ ။ ချီးထုပ်ကြီးများပေါ့ရှင် ။ သမ္မတကြီး ကို တစ်ခုပြောချင်တာက ပြည်ပရောက် ပညာတတ်များကို ပြည်တွင်းပြန်လာဖို. ခေါ်တာမျိုးကို လက်သင့်ခံနိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံရောင်းစားခဲ့တဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတော့ လက်မခံသင့်ပါဘူး ။ သူတို.ရှုပ်ခဲ့တဲ့ အရှုပ်ထုပ်များကို ရှင်းခိုင်းပါ ။ ထိုက်သင့်သော အပြစ်ဒဏ်ကျခံပါစေ ။ ပြည်ပမှာ နေလို.ဝ မှ တိုင်းပြည်ပြန်သူဌေးလုပ် ပြီး ခေါင်းချမယ်ဆိုတာကတော့ လူပါးဝလွန်းလှပါပြီ ။
သူတို.ပြောကြပါလိမ့်မယ် ။ ငါတို.က တိုင်းပြည်အတွက် တိုက်ခဲ့တာ ၊ ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်ခဲ့တာလို. ။ မှန်ပါတယ် ။ တိုင်းပြည်အတွက် လက်နက်ကိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ် ။ ကျမတို. ပြည်သူတွေက လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို အားမပေးခဲ့ပါ ။ လက်နက်ကိုင်ပြီး လူတစ်စုကို နိုင်နင်းအောင် အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့လို. ၊ အာဏာရူးခဲ့ကြလို. အုပ်စုကွဲမှု.တွေ ၊ အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်မှု.တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကမ္ဘာသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံ့အရေးထက် အိတ်ဖောင်းဖို.က ပိုပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ သမိုင်းကိုရိုင်းစေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံတွေကို နေရာပေးခဲ့တဲ့ အဖိုးကြီးများ ကို တွေ.ချင်ပါသေးတယ် ။
ဒီလူတွေ တိုင်းပြည်ထဲ ပြန်ရောက်တာ တိုင်းပြည်အတွက် အရမ်းအန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် ဆိုးကျိုးများကိုသာ ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျမ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ. ကန်.ကွက်ပါတယ် ။
ကြုံတုန်း နောက်ထပ်ပြောချင်တာလေး တစ်ခုကတော့ လွတ်လပ်တိုင်းကောင်းတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ ။ လွတ်လပ်သင့်သောနေရာမှာသာ လွတ်လပ်စေလိုပါတယ် ။ ခုဆို တလွဲဆံပင်ကောင်း မီဒီယာ လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး စာစောင်တွေထဲ ကြက်သာသာ ပုံတွေပါလို.ပါ ။ သီချင်း သရုပ်ဆောင်တာတောင် မောင်နှမချင်း ၊ သားအမိချင်း ကြည့်လို.မသင့်အောင် ဖြစ်ပျက်နေကြပြီ ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု.ဟာ အရမ်းချစ်ဖို.ကောင်းပါတယ် ။ ရင်ဖုံးလက်ရှည် ဝတ်ဖို.ပြောနေတာမဟုတ်ပါ ။ အရှက်တရားလေး ရှိဖို.ပြောနေတာပါ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ တိုးတက်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ.နိုင်ငံ ဖာနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ် ။ တကမ္ဘာလုံးက အဲ့လိုပဲ သိကြတယ် ။ ကျမ အနေနဲ.တော့ ကျမ နိုင်ငံကို အဲ့လို နိုင်ငံ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး ။ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ များအနေနဲ.လည်း ခွင့်မပြုသင့်ဘူး ။
အနောက်နိုင်ငံတွေ တိုးတက်တာကို အတုယူပါ ။ သို.သော် ယဉ်ကျေးမှု.ကို မယူပါနဲ. ။ အရှင်းဆုံးပြောလိုက်မယ် ၊ ဒီက မိန်းမတွေသည် မူးလာရင် တွေ.တဲ့သူနဲ.အိပ်ပါတယ် ။ အလှအပ အပေါ်ယံဦးစားပေးပါတယ် ။ ပိုက်ဆံမရှိ အကြွေးကဒ်နဲ.သုံးပါတယ် ။ ယောင်္ကျားတယောက်ပြီးတယောက် အိပ်ဖို.လဲ ဝန်မလေးပါ ။ ကန်တော့ပါရဲ့ ဝါသနာအရ ဖာများပါပဲ ။ ဘာသာတရားမရှိ ၊ ဂါရဝတရား မရှိပါ ။ ဒါတွေကို အတုမယူကြပါနဲ.။ သူတို.စည်းကမ်းရှိပုံ ၊ အလုပ်ကြိုးစားပုံ များကိုသာ အတုယူပါ ။
အပြင်က ကြည့်ရင် အားကျစရာ ကောင်းပေမယ့် တကယ်တမ်းနေရတဲ့အခါ အလွန်စိတ်ပျက်စရာပါ ။ အကြွေးကဒ်မရှိရင် အသက်မရှင် နိုင်တော့သလို ရထားလမ်းပေါ် ခုန်ချသေသူတွေကလည်း နေ.စဉ် ရှိမြဲပါ ။ အလုပ်လက်မဲ့တွေ ၊ တောင်းစားသူတွေ ၊ အမူးအရှုး တွေ ၊ ဆေးစွဲသူတွေလည်း များပါတယ် ။ လုံခြုံမှု.ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ရဲမဖမ်းနိုင်သေးတဲ့ လုယက်မှု.တွေ ၊ အနုကြမ်းစီးမှု.တွေ ရှိတာပါပဲ ။ ဖုန်းလုရုံလောက်နဲ.တော့ ရဲက အလုပ်ရှုပ်မခံပါ ။ ဒါတွေဟာ ကိုယ်နေတဲ့ နေရာ နဲ.ဆိုင်ပေမယ့် ဗဟုသုတ အဖြစ်ပြောပြတာပါ ။ အမည်းတွေ နေတဲ့နေရာဆို ဝေးဝေးရှောင်နိုင်လေ ကောင်းလေပါပဲ ။ အာရှတိုက်သားတွေက တော်ရုံတန်ရုံဆို ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတတ်ကြတာမို. အာရှတိုက်သားတွေကို အနိုင်ကျင့်တတ်ကြပါတယ် ။ အစိုးရက အလိုလိုက်ခဲ့လို. benefits လို.ခေါ်တဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးမှီစားနေတဲ့ လူပျင်းတွေဖြစ်လာကြလို. ခုဆို အစိုးရ အခက်တွေ.နေရပါတယ် ။ benefits ကြောင့် လင်ကောင်မပေါ်ပဲ မွေးတဲ့ single mother တွေ ကလေးမှီစားနေကြတာပါ ။ ဒါကြောင့်ခုဆို benefits ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အလုပ်အတင်းရှာစေခြင်း ၊ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများကို အရင်ကလို အိမ်ခွဲ မနေစေပဲ မိဘ နဲ.ပြန်နေကြဖို.စီမံခြင်းများ ပြောင်းလဲပြုလုပ်နေကြပါပြီ။
ပြောချ င်တာက တနိုင်ငံနဲ.တနိုင်ငံ စီးပွားရေးခြင်း ၊ ယဉ်ကျေးမှု.ခြင်း မတူညီကြပါ ။ copy cat ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံ ၊ ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှု. နှင့် ကိုက်ညီသော ဒီမိုကရေစီသာဖြစ်သင့်ပါသည်လို. ပြောချင်ပါသည် ။
ဘတ်ဂျက်တိုးလာသော်လည်း ချည့်နဲ့နေဆဲ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ
နိုင်ငံ၏ အဓိက လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက် သုံးစွဲရန် ဘတ်ဂျက်ကို အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ယခင်ထက် လေးဆတိုးခွင့် ပြုခဲ့သော်လည်း လက်ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၌ တက်ရောက် ကုသသူများအတွက်မူ ပြောင်းလဲမှု မရှိသေးကြောင်း ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှုခံယူနေသော ပြည်သူအချို့က သုံးသပ်ပြောကြားသည်။ ပြည်သူသို့ ပထမဆုံး အသိပေးခဲ့သည့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘတ်ဂျက်တွင် ယခင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလက်ထက် အသုံးပြုခဲ့သည့် ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက်ထက် လေးဆကျော် တိုးမြှင့်သုံးစွဲရန် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် ၀န်ထမ်းအချို့၏ စိတ်မရှည်စွာ ငေါက်ငမ်းမှုများ၊ ဆေးကုသမှုအတွက် လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများ မရှိသည့်အတွက် လနှင့်ချီ စောင့်ဆိုင်းနေရမှုများ၊ ဆရာဝန်နှင့်လူနာ မမျှတမှုများကြောင့် ဆေးကုသမှုရရှိရန် အချိန်ရှည်ကြာ စောင့်ဆိုင်းရမှုများ၊ ဆေးရုံများတွင် နေရာနှင့်လူနာ မမျှတမှုများမှအစ အရာရာသည် ဆိုးရွားနေသည့် အခြေအနေတွင်ရှိကြောင်း ပညာရှင်များ၊ ပြည်သူများက မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားသည်။
“ကိုယ်က အသည်းအသန်နဲ့ ဆေးရုံကို အားကိုးတကြီး ရောက်သွားတယ်။ ဘယ်သူမှ လာကြည့်မယ့်သူမရှိဘူး။ တစ်ခါသွားခေါ်တယ်။ ခဏနေ လာကြည့်မယ်လို့ပဲ ပြောတယ် မလာဘူး။ နောက်တစ်ခါ သွားခေါ်ရင် လာမှာပေါ့ ပြောထားတယ်၊ ခဏနေပါဦးဆိုပြီး အော်ထုတ်တယ်။ အဲဒီတော့ တော်ရုံတန်ရုံသူက နောက်ထပ် သွားမခေါ်ရဲတော့ဘူး။ လူနာအတွက် ဘယ်လောက်ပဲ စိုးရိမ်နေပါစေ သူတို့လာတဲ့အချိန်ကိုပဲ စောင့်ရတော့တယ်”ဟု မိခင်ဖြစ်သူကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ တက်ရောက်ကုသခဲ့ရသည့် လူနာရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်များ ဆေးရုံတိုင်းတွင် ရှိနေခြင်းမှာ ဆရာဝန်နှင့်လူနာကြား ဆက်သွယ်ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သည့် ၀န်ထမ်းနည်းပါးခြင်း၊ လူနာဘက်မှ မျှော်လင့်ချက် အားကိုးမှုများဖြင့် ရောက်လာသော်လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများဘက်မှ အကျိုးအကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်စေရန် အချိန်ပေးရှင်းပြမှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် နားလည်မှု လွဲမှားခြင်း ပြဿနာမှာလည်း ပိုမိုကြီးမားလာကြောင်း ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံသစ်ကြီးမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာကျော်ကျော်ကပြောသည်။
ဆရာဝန်အစား ရောဂါအကြောင်း၊ ဆေးဝါးအကြောင်း ရှင်းလင်းပေးခြင်းများ၊ စမ်းသပ်မှုများအတွက် လမ်းညွှန်ပေးခြင်းများ၊ ရောဂါအခြေအနေအား ရှင်းလင်းပြောပြနိုင်သည့် လူနာနှင့် ဆရာဝန်ကြား ဆက်သွယ်ကူညီပေးနိုင်သည့် ၀န်ထမ်းများ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းအချို့တွင်မူ အဆိုပါ ၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သော ၀န်ထမ်းများ ခန့်အပ်ထားရှိသည်။
နိုင်ငံတကာရှိ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများမှာလည်း ထိုကဲ့သို့သော ဆရာဝန်များ မဖြစ်မနေထားပြီး ပြည်တွင်းတွင် ဗဟိုနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ဆေးရုံများတွင်သာ နှစ်ဦး၊ သုံးဦးခန့်သာ ခန့်ထားနိုင်သည်။ လူနာဦးရေနှင့် မမျှတခြင်း၊ ဆေးရုံအများစုတွင် အဆိုပါ ၀န်ထမ်းများကိုယ်တိုင် ထိုကဲ့သို့ ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးရမည်ကို မသိရှိကြခြင်း စသည့်အားနည်းချက်များရှိကြောင်း သိရသည်။
“လူနာတွေဘက်မှာလည်း ထိန်းသိမ်းတာဝန်ယူမှုနဲ့ ခံစားခွင့် အခွင့်အရေးတွေ ဆိုတာရှိတယ်။ တချို့လူနာကျတော့လည်း အခွင့်အရေးယူတာမျိုး ရှိကြတယ်။ စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေ ဘက်ကလည်း အားနည်းချက်တွေ ရှိတဲ့အခါ အဲဒီ့နှစ်ဖက်တွေ့တော့ အခုနောက်ပိုင်း ပြဿနာတွေလည်း ပိုပိုကြီးလာတယ်”ဟု ဆေးရုံအုပ်ကြီးက ဆက်လက်ပြောသည်။
ဆေးရုံရှိ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ၏ ဆက်ဆံရေး မပြေပြစ်မှု ပြဿနာသည် ရှေးယခင်ကတည်းက အမြစ်တွယ်လာသည့် အလေ့အကျင့်တစ်ခုအဖြစ် ယခုထက်တိုင်လည်း ဆက်လက်တည်ရှိနေမြဲဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်များနှင့် လူနာများအကြား နားလည်မှုများ လွဲမှားလာခြင်းများ၊ ကင်ဆာရောဂါ ကဲ့သို့သော ရောဂါများ ကုသမှုအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများ လုံလောက်စွာ မတပ်ဆင်နိုင်သေးသည့်အတွက် လူနာများ ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုသမှုခံယူရန် ရက်ရှည်စောင့်ဆိုင်းနေရသည့် ပြဿနာသည်လည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ လူပြောများလာသည့် ကြီးမားသော ပြဿနာများ ဖြစ်လာသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသူများအတွက် ဓာတ်ကင်ကုသရန် ဓာတ်ကင်ပေးနိုင်သည့်စက် သုံးလုံးသာရှိပြီး ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်ရှိသည့် ဓာတ်ကင်စက်သည် အလုပ်မလုပ်တော့သဖြင့် တောင်ကြီးဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသနိုင်ပါက သွားရောက်နိုင်ပြီး ကျန်သူများမှာ ဓာတ်ကင်ရန် လနှင့်ချီ စောင့်ဆိုင်းနေကြရကြောင်း လူနာရှင်တစ်ဦးက သူ၏အခက်အခဲအား နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာထဲတွင် ရေးသားထားသည်။
အချိန်တိုင်း၊ စက္ကန့် မိနစ်တိုင်း တိုးပွားလာသည့် ကင်ဆာဆဲလ်များကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ကုထုံးအဆင့်တွင် ဓာတ်ကင်ကုသခြင်းသည် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ကင်စက် မရှိသောကြောင့် အခြားသို့လည်း သွားရောက်ကုသရန် မတတ်နိုင်သူများအတွက် ထိုင်စောင့်ရန် နည်းလမ်းအပြင် မရှိတော့ပေ။
လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးမှုများတွင်လည်း နေရာဒေသ အများအပြား၌ ဆေးရုံမရှိခြင်း၊ ဆရာဝန်မရှိခြင်း စသည့်အခက်အခဲအမျိုးမျိုး ဖြည့်စွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းမှုများမှာလည်း အများဆုံးဖြစ်နေသည်။
နိုင်ငံတော်မှ ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ်အတွက် ချပေးသော ဘတ်ဂျက်သည် ဆေးကုသမှုအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ၀င်ရောက်ကာမိခြင်း မရှိသေးဘဲ ဆေးရုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ၀န်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်သေးသည်။
ဆေးရုံများတွင် အလှူရှင်များနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ၀ယ်ယူပေးထားသည့် ရောဂါရှာဖွေရေး စက်ကိရိယာများအား စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေးစနစ်ဖြင့် အပြင်ဓာတ်ခွဲခန်းများထက် သက်သာသောဈေးဖြင့် လူနာများ ကုသနိုင်သည်။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သည့် လူနာများအတွက် ဆေးရုံအလိုက် အခမဲ့ကုသမှုများလည်း ဆောင်ရွက်ပေးကြကြောင်း ဒေါက်တာကျော်ကျော်ကပြောသည်။
“မတတ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလာတဲ့သူကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် အခမဲ့လုပ်ပေးရတာပါပဲ။ လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာသာ ပြန်မပြောကြတာပါ။ စာရင်းတွေအရဆိုရင် မနှစ်က ဆေးရုံတက်တဲ့ လူနာအားလုံးရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အခမဲ့စစ်ဆေး ကုသမှုတွေ လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ တချို့ကျတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် စရိတ်မျှပေးခြင်းက မရှိတဲ့သူတွေအတွက် သက်သာစေတယ်လို့ မတွေးဘူး။ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်အနေနဲ့ကို သဘောထားပြီး မရရင် မကောင်းပြောတော့တာပဲ”ဟု ဒေါက်တာကျော်ကျော်ကပြောသည်။
“တစ်ခါက ဆေးရုံကို လူမမာသွားမေးရင်းနဲ့ ဓာတ်လှေကားထဲမှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က နောက်တစ်ယောက်ကို လည်ပင်းက ဆွဲကြိုးကိုချွတ်ထား၊ ဆရာဝန်တွေက တတ်နိုင်လားမေးရင် မတတ်နိုင်ဘူးလို့ပဲ ဖြေနော်ဆိုပြီး ပြောနေတာမျိုး ကြုံဖူးတယ်”ဟု အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဆေးကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဆေးရုံတိုင်းတွင် ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ စရိတ်မျှပေးစနစ်ဖြင့် လူနာများထံမှ ရလာသည့် ငွေကြေး၏ ထက်ဝက်အား နိုင်ငံတော်၏ ကျန်းမာရေး ဘတ်ဂျက်အတွင်း အပတ်စဉ်ဖြစ်စေ၊ လစဉ်ဖြစ်စေ ပြန်လည်သွင်းရပြီး ထိုငွေကြေးသည် နိုင်ငံတော်မှ ဆေးရုံအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ၀န်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန်အတွက် အသုံးပြုကြသည်။
ကျန်ထက်ဝက်အား ဓာတ်ခွဲခန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများ ပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ဆေးရုံများတွင် သုံးစွဲပြီး နိုင်ငံတော်မှ စက်ပစ္စည်းများ လိုအပ်သလို ဖြည့်ဆည်းပေးသော်လည်း လုံလောက်မှု မရှိသည့်အခါ လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူနိုင်ရန်နှင့် ပျက်စီးမှုများအတွက် အလှူရှင်များနှင့် ထိုစုဆောင်း ငွေကြေးများကိုသာ အဓိကမှီခိုနေရကြောင်း ဆေးရုံများရှိ တာဝန်ရှိသူများကပြောသည်။
“ကျောက်ခြေစက်ဆိုရင် အပြင်မှာ သွားကုသရင် သုံးသိန်းလောက် ကုန်တယ်။ ဆေးရုံမှာ ကိုးသောင်းနဲ့ ရအောင် ကုသပေးတယ်။ အဲဒီလိုစက်တွေမှာ ကွိုင်တစ်ခုခု သက်တမ်းလွန်သွားလို့ သုံးလို့မရတော့လို့ရှိရင် ဒေါ်လာသောင်းချီ ကုန်တယ်။ ဒါဆို နိုင်ငံတော်က မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီ့အတွက် အလှူရှင်တွေရှာပြီး အလှူခံလို့ရတာနဲ့ ပြုပြင်စရိတ်ဆိုပြီး စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့ လဲရတယ်။ အဲဒါကလည်း ဖြစ်မှဝယ်ရင် လနဲ့ချီကြာတဲ့အတွက် ကြိုဝယ်ထားရတယ်။ မဟုတ်ရင် လူနာတွေ ပြုံပြီးစောင့်ရတယ်”ဟု ဒေါက်တာကျော်ကျော်ကပြောသည်။
လူနာဆောင်များတွင် နိုင်ငံတော်မှ အဆောက်အအုံ၊ ခုတင်နှင့် ၀န်ထမ်းများသာ ထားရှိပေးနိုင်ပြီး စက်ပစ္စည်းများမှာလည်း လူနာအရေအတွက်နှင့် လုံလောက်မှု မရှိကြသည့်အခါ အလှူရှင်များ ရှာဖွေခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် လူနာများ ထည့်ဝင်ထားသည့် ငွေကြေးများဖြင့်လည်းကောင်း ၀ယ်ယူတပ်ဆင်ပြီး ကုသပေးခြင်းဖြင့်သာ လည်ပတ်နေရကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီးမှ ပါမောက္ခဌာနမှူးတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံသစ်ကြီးတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် တတိယလေးလပတ်အတွင်း ဓာတ်မှန်၊ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် အခန်းခတို့မှ ရရှိငွေ၏ ထက်ဝက် ၁၃၂ သိန်း နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည်သွင်းခဲ့ပြီး ငွေကြေးမတတ်နိုင်သဖြင့် အခမဲ့စမ်းသပ်၊ ဓာတ်ခွဲ၊ ဓာတ်မှန်နှင့် ဆေးလှူဒါန်းမှု စုစုပေါင်း ၁၈၄ သိန်းတွင် နိုင်ငံတော်မှ ပါဝင်လှူဒါန်းပွဲ ကျပ်တစ်သိန်းခွဲခန့် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ လူနာဆောင် အရေအတွက် များပြားသည့် ဆေးရုံကြီးများတွင် နိုင်ငံတော်သို့ နှစ်စဉ်ပြန်သွင်းရငွေ ကျပ်သိန်းထောင်ချီရှိကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော် ကျန်းမာရေးဘတ်ဂျက် လေးဆတိုးမြှင့် လိုက်သည့်အတွက် လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် ယခင်က နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း တရားဝင် သတ်မှတ်ငွေ တစ်ဒေါ်လာလျှင် ခြောက်ကျပ်ဖြင့် လဲလှယ်နိုင်သော်လည်း ယခု ကျပ်ရှစ်ရာကျော် ဖြစ်သွားသည့်အတွက် အဆ ၁၃၀ ခန့် မြင့်မားသွားခြင်းကို လေးဆကျော် တိုးမြှင့်လိုက်သည့် ဘတ်ဂျက်က အနောက်ကမလိုက်နိုင်တော့ပေ။
“အဲဒီတော့ ပိုက်ဆံတိုးပေးပေမယ့် သိသာထင်ရှားတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေတော့ မရောက်လာသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ တိုးခန့်လို့ ရနိုင်မယ့် အလားအလာတွေတော့ ရှိတယ်။ အခုလည်း ဆရာဝန်တွေ အသစ်ခန့်ထားဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ”ဟု ဒေါက်တာကျော်ကျော်ကပြောသည်။
အခြားနိုင်ငံ အသီးသီးတို့တွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခမဲ့ကုသခြင်းမျိုး မရှိသော်လည်း ချမ်းသာသည့် နိုင်ငံအလျောက် ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှု များပြားခြင်း၊ လစဉ် ကျန်းမာရေးအတွက် စုဆောင်းငွေများ ထားရှိခြင်း၊ အာမခံစနစ်များ ထားရှိခြင်း စသည်ဖြင့် နိုင်ငံအလိုက် သင့်တော်မည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ပြည်သူများ ကျန်းမာရေးကုသမှု ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
ပြည်တွင်းတွင်မူ ကျန်းမာရေးအတွက် နိုင်ငံတော်က ငွေကြေးပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီ ၀င်ငွေနှင့် စီးပွားရေးနိမ့်ပါးခြင်း၊ စရိတ်မျှပေးဖြင့် ကုသနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ မလုံလောက်ခြင်း စသည်တို့က ဆေးကုသမှုများအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာသည်။ နီးစပ်ရာ ဆေးမြီးတိုများဖြင့်သာ ကုသခြင်းတို့ကြောင့် မလိုအပ်သည့် နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ ဖြစ်လာခြင်း၊ မဖြစ်မနေ ဆေးကုသရမည့် အခြေအနေကျမှ ဆေးရုံရောက်လာကြသည့်အတွက် ကုသချိန် နောက်ကျပြီး မလိုအပ်ဘဲ အသက်သေဆုံးခြင်းများကို ပြည်သူတို့ ခံစားနေကြရကြောင်း ပညာရှင်များက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
အလိုအပ်ဆုံး အရာသည်ကား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနေသူများနှင့် ခံယူနေကြသူများပါ အပြုအမူများ၊ အပြောအဆိုနှင့် စိတ်သဘောထားများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာကျော်ကျော်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
အာဏာပိုင်များခွင့် မပြုေ သ်ာလည်း မန္တေ လးတွင် ဆန္ဒေ ...
ဦးအောင်သိန်း လင်းတင် သွင်းေ သာ အဆိုကို ဒီ ချုပ် ၊...
ကွန်မြူနစ် တရုတ်ကို ချီးမြှောက် ထားေ သာ ပြဋ္ဌာန်း စာ...
ဒီငြိမ်းလင်းနှင့် စည်သူမောင်တို့၏ ထင်ပေါ်ချင်သော လု...
ပြန်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေး အင်အားစု ခေါင်းဆောင်တွေ...
၂၀၁၅ တွင် ASEAN+6 နိုင်ငံများ အတွင်း လွတ်လပ်စွာ ကု...
KIA အဖွဲ့ မိုင်းထောင်ရာမှ ကိုယ့်မိုင်းနှင့်ကိုယ် မ...
ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ သားသမီးတွေ မီဒီယာအားကိုး နဲ့ ပြည်သူ့ ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်အတွက် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး...